EMPHEPHA PHEZULU kwendlu yokujonga ulwandle iAberdovey - I-Airbnb
EMPHEPHA PHEZULU kwendlu yokujonga ulwandle iAberdovey
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJulian
Misa kulwandle lwase-Aberdovey ngolwandle oluhle kunye neembono zeNtaba. Unxweme olunesanti luchasene kwaye iivenkile kunye neeresityu zihamba nje kancinci. Relax kwi-bay window yakho ubukele abantu kunye ne-tide iza kwaye ihamba.
Indawo yethu ye-2nd inekhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala ngaphambili kunye nezo mbono zimangalisayo zolwandle.
Ngasemva ligumbi lakho lokulala elahlukileyo elineSuperking (6ft) ibhedi ephindwe kabini.
Igumbi lokuhlambela leensuite.
I-Lookout yolwandle yokujonga iiflethi inezindlu ezi-4 ezihlukeneyo ngaphakathi kwesakhiwo esifanayo. 1 kumgangatho ngamnye.
Siye salungisa kwaye sahlaziya isakhiwo sonke kwaye besiqhuba ngempumelelo iminyaka eyi-8.
Amagumbi aphezulu ama-3 abelana ngokungena ngaphambili okufanayo. Zijonge ngokwakho ngephedi. I-sanitizer yesandla inikwe epasejini. I-Boathouse inomnyango wokungena owahlukileyo kwaye ikumgangatho ophantsi. Umgangatho osezantsi kumgangatho woku-1. Umgangatho oPhezulu kumgangatho we-2 kunye neCrownest kumgangatho wesi-3. Bahlala beqeshwa kunye kwiindibano zosapho kunye nezihlobo ezikuvumela ukuba ube nesithuba sakho ngeli xesha nikunye. Singakwazi ukuhlalisa abantu abali-10 xa bonke bebhukisiwe.
Zonke zinekhitshi eline-cooker, i-hob, i-microwave, ifriji (enegumbi elincinci lefriji) kunye nomatshini we-nespresso. Zonke iipani, izitya, ii-cutlery kunye nezitya zinikezelwe.
Zonke iibhedi zethu zi-Superking kabini okanye zinokuba ziibhedi ezingamawele.
Sinikezela ngemvume yokupaka kwindawo nganye. Ungayipakisha kwindawo yokupaka iimoto elwandle ngokuchaseneyo.
I-Aberdovey (okanye i-Aberdyfi ngesi-Welsh) yilali entle engaselwandle kumazantsi esiphelo se-Snowdonia National Park. Kukho iivenkile ezincinci ezizimeleyo, iicafe kunye ne-ice cream parlors ecaleni kwendlela ukusuka kuthi. Ukukhwela kwijethi, ukuqubha elwandle okanye ukuhamba ngeentaba ngasemva zizinto ezithandwayo. Kukho ikhosi yegalufa yobuntshatsheli kule lali.
Ngosuku lokufika uya kunikwa ikhowudi yabucala enamanani ama-4 ukufikelela kwisakhiwo kunye nendlu yakho ngexesha lokuhlala kwakho. Ndingasoloko ndiqhagamshelwa ngexesha lokuhlala kwakho ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.